January 2014 ~ SAI SENG SERK
10:27 PMSHAN POEM No comments
လꨰတ်ꨲ မꨯꨳတꨤꨓ်ꨲ ꨟိူဝ်ေꨀုꨳ
ꨀူမ်ꨲ လိꨓ်တိူဝ်ꨵေꨀုꨳ
ꨟဝ်းယူꨲ တုꨲ သေꨲ တေꨵ
ꨓမ်ꨵ ꨁုꨓ်ꨲ သေသ်ꨮ
ꨬ ပꨵ ꨅ်ꨮသေလꨤတ်ꨳꨬ တꨵ ꨬ တꨵ ယဝ်ꨵ ꨓုꨳ ။
ပꨰꨀ်ꨵ သမ်ꨵ ဝုꨳ
ꨟဝ်းတꨤꨯꨀꨮုꨲ သေပꨰတ်ꨲ ပွꨀ်ꨳ
လွꨀ်ꨳꨀꨮုꨲ သေပꨰတ်ꨲ ꨁꨤပ်ꨳေꨀုꨳ
ꨟဝ်းတေပ်ꨮꨵ မွင်းထꨰင်ꨳꨅꨤတ်ꨳꨓုꨳယူꨲ ꨓုꨳ။
ပꨯꨲ မီးေꨀုꨵ မုင်းꨁုး
ꨕူꨓ်မုးပꨯꨲ မီးေꨀုꨵ ꨀင်ꨳꨅွင်ꨳ
ꨕꨯးꨡမ်ꨲ မꨯꨳꨬ လꨳ
ယူဝ်ပꨯꨲ ꨅ်ꨮꨳတုꨲ ꨟဝ်းꨀွꨓ်ꨲ ယူဝ်ꨵေꨓုꨳ။
6:17 AMSHANHISTORY No comments
6:04 AMTAISTORY No comments
ရှမ်းအမျိုးသားများ၏ရိုးသားမှု၊ ရောင့်ရဲမှု၊ အေးချမ်းမှု၊ သည်းခံတတ်မှုစသည့်အတုယူဖွယ်ကောင်း သော စိတ်နေစိတ်ထားများနှင့်ပတ်သက်၍ "သည်းခံလျှင် ရွှေတုံးကြီးဖြစ်မည်"ဟူသော စကားပုံတစ်တစ်ရပ် ကိုလည်း ရိုးရာပုံပြင်နှင့်ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ယင်းစကားပုံကို ရှမ်းပြည်တစ်ဝန်းလုံး ပြောဆိုသုံးနှုန်းလျက်ရှိကြသော်လည်း ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ဖျား ခန္တီးလုံမြေပြန့်ဒေသမှ ခန္တီးရှမ်းများ၏"တိုင်းခမ်းတီး"ရှမ်းပုံပြင်များတွင် တွေ့ရပါသည်။
ပုံပြင်အမည်မှာ "ဆပ်ကန့်ပြင်တုန်ငင်း၊ ဆောင်းကန့်ပျင်တျန်ခမ်း"(ဆယ်ခါသည်းခံ ငွေတုံးဖြစ်၊ အခါ ၂၀ သည်းခံ ရွှေတုံးဖြစ်)ဖြစ်ပါသည်။ ပုံပြင်ကို မူရင်းအတိုင်း ကူးယူထည့်သွင်းလိုက်ပါသည်။
ပုံပြင်မှာ။ ။ရှေးအခါက ရွာတစ်ရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်။ လင်မယားနှစ်ဦးလုံးဟာ သစ္စာရှိကြ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာသီလနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပေ မယ့် ကျင့်ဝတ်သီလကို ဖောက်ပြန်ချွတ်ချော်ခြင်း မရှိကြဘူး။
လင်ယောက်ျားဖြစ်သူမှာလဲ အလွန်သည်းခံတတ်တဲ့အလေ့ ရှိတယ်။ သူတို့လင်မယားရဲ့အကြောင်း ကိုသိတဲ့ သူတို့ရဲ့အိမ်စောင့်နတ်ဟာ ရွာစောင့်နတ်ကတစ်ဆင့် နယ်စောင့်နတ်ကြီးအထိ အစီရင်ခံထားတာ ကြောင့် မကောင်းသူကိုပယ်၊ ကောင်းသူကို ကယ်ရမယ့်ဝတ္တရားရှိတဲ့နယ်စောင့်နတ်ကြီးဟာလဲ အဲဒီလင်မ ယားရဲ့သတင်း မှန် မမှန်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိရှိဖို့ တစ်နေ့မှာ ခင်ပွင်းလင်မရှိခိုက် ဇနီးသည်သာ ထိုရွာ မှာ ရှိနေစဉ် နတ်မင်းဟာ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်တဲ့သူဌေးသားလုလင်ပျိုတစ်ဦးရဲ့အသွင်အပြင် ဖန်ဆင်းပြီး အဲဒီ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးဆီသွားကာ အမျိုးသမီးကို သူနဲ့သာ ဆက်လက်ပေါင်းသင်းဖို့နဲ့ သူနဲ့ပေါင်းသင်း သွားပါက ရာသက်ပန် ပူပင်စရာမရှိ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ ချမ်းချမ်းသာသာ ဂုဏ်သရေရှိရှိ လူလောကအလယ်မှာ တင့်တင့်တယ်တယ် နေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ လက်ရှိလင်ဟာ ဘာမျှအသုံးမကျ၊ သင် နှမကို ဒီလိုပြစ် ပြစ်ခါခါ လျစ်လျူရှုထားတာတွေ့ရလို့ မကြည့်နိုင်ကြောင်း၊ အခုပဲ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းဖို့ မိမိအလိုကို လိုက် လျောစေလိုကြောင်းနဲ့ ချော့မော့လှည့်ဖြား ပြောဆိုတယ်။
ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးကတော့ နည်းနည်းကလေးမျှ ဣနြေ္ဒမပျက်ဘဲ ကျွန်မဟာ လင်ရှိမယားဖြစ်တယ်၊ တခြားဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းဖို့ အလိုမရှိပါ။ ကျွန်မရဲ့လင်ယော က်ျားမှာလဲ ဥစ္စာပစ္စည်း ဆင်းရဲပေမယ့် သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောအရဆိုလျှင် ဆင်းရဲသူ အသုံးမကျလို့ မဆိုသာပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့လင်မယားမှာ သုံးမကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်၊ အဲဒီဥစ္စာဟာ သာ ကျွန်မအဖို့ အထူးနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့၊ သူတစ်ပါးတို့လဲ မခိုးနိုင်တဲ့ ကိုယ်နဲ့မကွေမကွာ ဘယ်သွားသွား ၀န်မလေး မပင်ပန်းဘဲ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး ချမ်းချမ်းသာသာ အိမ်ထောင်မှုကို အစဉ်စိုပြည်နိုင်စေတဲ့ ဥစ္စာစစ် ဥစ္စာမှန် ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒီဥစ္စာဟာ ဘယ်ဥစ္စာလဲ၊ ဘယ်မှာထားသလဲ၊ ပြပါလို့ပြောတဲ့ အခါ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးက အဲဒီလိုဥစ္စာမျိုးဟာ ကိုယ်စိတ်သန္တာန်မှာသာ ထားသိုစမြဲဖြစ်လို့ မပြနိုင် ပါလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ နတ်မင်းဟာ အမျိုးမျိုး လှည့်ပတ်လို့ မရတဲ့အဆုံး ပြန်သွားတယ်။
နောက်တစ်နေ့ ညနေအချိန်မှာ နတ်မင်းဟာ နောက်တစ်ခါ လူသားလုလင်တစ်ဦးလို ဖန်ဆင်းပြီး အဲဒီသူဆင်းရဲလင်မယားအိမ် သွားပြန်တယ်။ အိမ်ရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကလဲ ဧည့်သည်ကို ညစာ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးတယ်။ ညအိပ်ချိန်တန်လို့ အိပ်ခန်းတစ်ခုမှာ အိပ်ရာနေရာ ပြင်ဆင်ပေး တဲ့အခါ သူတစ်ဦးတည်း မအိပ်ဝံ့ဘူးဆိုလို့ လင်မယားနှစ်ဦးရဲ့အိပ်ခန်းထဲကို ပြောင်းပေးပြီး သီးခြားတစ် ဘက်မှာ အတူအိပ်စေတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက်က တစ်ဘက်မှာ အတူအိပ်တယ်။ ညဉ့်နက်လာတဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်းခွဲပြီး မအိပ်ဝံ့ကြောင်းပြောလို့ အိမ်ရှင်ယောက်ျားနဲ့အိပ်ရာချင်းလဲလှယ်ပြီးအိပ်ရတယ်။ သန်းကောင်ချိန် ရောက်တဲ့အခါ အိမ်ရှင်မကို ဆော့သယောင်၊ ချော့သယောင်၊ ကစားသယောင်ပြုလို့ လင် ဖြစ်သူက အသံကို ကြားနေရတယ်။ ထပြီး ထင်းချောင်းနဲ့ ရိုက်သတ်ပစ်လိုက်ရ ကောင်းမလားလို့တောင် စိတ်ကူးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူကြီးများ ဆုံးမတဲ့စကားပုံအရ(ဆပ်ကပ်ပျင်ကျန်ငင်း၊ ဆောင်းကန်ပျန်ကျန်း ခမ်း)(ဆယ်ခါသည်းခံလျှင် ငွေတုံးဖြစ်၊ အခါနှစ်ဆယ်သည်းခံလျှင် ရွှေတုံးဖြစ်)ဆိုတဲ့စကားကို သတိရလို့ သည်းခံနိုင်လေ အဖိုးတန်လေ ကောင်းလေဖြစ်တယ်လို့ ဆင်ခြင်သတိရပြီး ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် ဧည့်သည်က တစ်ဆင့်တက်ပြီး သူ့ဇနီးသည်ကို စော်ကားကျူးလွန်နေသလို အသံကြားရပြန်တယ်။ (စင်စစ် မှာ ဇနီးသည်ဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်ဘဲ အိပ်ပျော်နေတယ်)ဒါပေမယ့် နတ်ရဲ့တန်ခိုး က ဇနီးသည်ကို လုံးဝမထိပေမယ့် ထိပါးသလိုအသံနဲ့ အမူအရာများကိုသာ လင်ယောက်ျားအိမ်ရှင်ဖြစ်သူကို ကြားသိစေတာဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဓားနဲ့တစ်ချက်တည်း ခုတ်သတ်လိုက်ရ ကောင်းမလားလို့ ဒေါသထွက်လာပြန်တယ် ဒါပေမယ့် သူ ခန္တီတရားပျက်သွားမှာကို စိုးတာကတစ်ကြောင်း၊ သည်းခံခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကို သတိ ရတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် သည်းခံနိုင်လေ ကောင်းလေဆိုတဲ့စကားပုံကို နှလုံးသွင်းပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ် ချင်သလို ဖြစ်ပါစေတော့လို့ ဆင်ခြင်နေ ဥပေက္ခာပြု လျစ်လျူရှုနေတုန်း အိပ်ပျော်သွားတယ်။
နတ်ဟာ အဲဒီလင်မယား အိပ်ပျော်သွားကြမှန်းသိလို့ သူအိပ်နေတဲ့နေရာမှာ သူ့ကိုယ်နဲ့တူမျှတဲ့ပမာ ဏရှိပြီး အချိန်ပိဿာ တစ်ထောင်ခန့်ရှိတဲ့ရွှေတုံးကြီးတစ်တုံးကို ထားပေးပြီး "သင်တို့လင်မယားဟာ ရှေးလူ ကြီးသူမများ အမိအဖသူတော်မြတ်များရဲ့အဆုံးအမကို မျက်ကွယ် မျက်မြင်မှာ အလွန်ဆင်းရဲခံပြီး မဖောက် မပြန် လိုက်နာကျင့်သုံးကြတာကို ကျွန်ုပ်နယ်စောင့်နတ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စမ်းသပ်စုံစမ်းသိရှိခဲ့ရပြီ။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်ဟာ မကောင်းသူကိုပယ်၊ ကောင်းသူကိုယ်ကယ်ဖို့ ၀တ္တရားရှိတဲ့အတိုင်း သင်တို့လင်မယား ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး ငြိုငြင်ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းမှ ကယ်တင်မစရမယ်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီရွှေတုံးကို သင်တို့အလို ကျ သုံးစွဲအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်ဖို့ သင်တို့ကို ပေးအပ်ပါတယ်"လို့ စာတမ်းတစ်စောင်ပါ ရေးသားထားခဲ့ ပြီး သူ့ဗိမာန်သို့ပြန်သွားတယ်။
မိုးလင်းလို့ ဧည့်သည်ကို ထမင်းကျွေးဖို့ နှိုးကြည့်တဲ့အခါ ဧည့်သည်မရှိတော့ဘဲ စောင့်ခြုံထားတဲ့ ၀ါ ၀ါဝင်းဝင်းနဲ့လူသဏ္ဌာန် ရွှေတုံးကြီးနဲ့စာတစ်စောင်ကို တွေ့ရလို့ အလွန်အမင်းအံ့သြသွားပြီး ညက အဖြစ်အ ပျက်များကို လင်မယားနှစ်ယောက် မေးကြပြောကြတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး အချင်းချင်းပိုမိုအချစ်တိုးကြ ကာ ရာသက်ပန် ကိုယ်ကျင့်မပျက် သူတော်ကောင်းတရားတို့ကို လက်မလွတ်ဘဲ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကြင်ကြင် နာနာနဲ့ နေထိုင်သွားကြတယ်။
5:49 AMSHAN POEM No comments
6:57 AMMYOPINION No comments
ကျွန်တော် စကားနဲနဲ.ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် ဗမာပြည်ကျောင်းဆယ်တန်းအောင်တော. တက္ကသိုလ်
တက်ဖို. လမ်းစသစ်ဖွင်.လာပါတယ်။ဆယ်တန်းတော. ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပြင်ဦးလွင်(ခေါ်)မေမြို. (ခေါ်) ပန်အူလုံမှာအောင်မြင်ခဲ.ပါသည်။အဲအချိန်တက္ကသိုလ်ကို ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ.သွာ
းပြီး နှစ်နှစ်တက်ဖြစ်ခဲ.ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို.ကိုပြန်လဲ ပြောင်းလာပါတယ် အဲအချိန်ရန်ကုန်မှာ ပညာလေ.လာ
ဆည်းပူးခဲ.ပြီး နောက်ဆုံးနှစ် ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာ ပြောင်းပြီးပြန်လာတက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲအချိန်ကျော
င်းမှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရှိပါတယ် ခပ်များများတော. ဗမာလူမျိုးများတာပေါ.။တစ်နေ.တော. ကျောင်းသွ
ားတာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတယ် ဗမာလူမျိုးပေါ.နော် ဘယ်ကပြောင်းလာသလဲ လို.မေးတော.
ကျွန်တော်က ရှမ်းပြည်နယ်ဖက်ကနေပြောင်းလာတာပါလို.ပြောတော. သူကဘာပြန်ပြောသလဲလို.မေးတေ
ာ. ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆို ရင် SSA တောင်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ဦးရွက်စစ်ကိုသိသလားလို.မေးတယ်။အဲအချိန်မှာ
ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ သိလိုက်ရတယ် အော် ကျွန်တော်တို. စ၀်ရွက်စစ်က ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေတေ
ာင်သိကြတယ်ဆိုတာ အရမ်းသြအံသွားတယ် ဘာဖြစ်လို.လဲလို. သူ.ကိုပြန်မေးတော.ကျွန်တော်.သူငယ်ချ
င်းကပြန်ပြောလိုက်တယ် ငါကတဲ. ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်ပါ ဒါပေမဲ. Mr. ရွက်စစ်ကို ကြိုက်တယ်တဲ.။ပာုတ်ပါတ
ယ်လို. ဗမာပြည်လူသားပဲ သူ.ကိုသိကြတယ်ဆိုတာ အရမ်း စိတ်ချမ်းသာသွားတာပဲ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော
. ကျွန်တော်တို. ရှမ်းပြည်နယ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်နာမည်သူတို.သိတယ်ဆိုတာ အရမ်း
Surprise ဖြစ်မိ.သွားတာပေါ.။အဲဒါနဲ. ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးတော. အမေရိကန်သွားဖို. သံရုံးမှာသွားဖြေေ
တာ. တစ်ချို. သံရုံးသမားတို. လူကြီးတို. (နိုင်ငံခြားသား) ကျွန်တော်.ကိုနောက်ထပ်မေးကြည်.တယ်။စိုင်း
ဆိုတော. ရှမ်းလူမျိုးနေမှာပေါ.နော် ရှမ်းစကားတတ်လားလို. ကျွန်တော်.ကိုမေးတယ် ကျွန်တော်လဲ တတ်တာပေါ.လို. ကျွန်တော် အဖေလဲရှမ်းအမေလဲရှမ်း ရှမ်းစစ်စစ်ပဲလို.ပြောလိုက်တော. သူတို.စိတ်ထဲ
ထပ်မေးပြန်ရော Do you know U Yawt Sat Army ? ပာား ပာား ကျွန်တော်လဲ ရီလိုက်ရော သိတာပေါ.
လို.လူတော.မမြင်ဖူးဘူး နာမည်ပဲကြားဖူးတာလို.ပြောလိုက်တော. သူက အောပာုတ်လားလို.ပြန်ပြောရော
ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လို. အဲအကြောင်းပြောပြနေသလဲဆိုတာ ကိုယ်.ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပာာ နိုင်ငံခြားသ
ားမက ပြည်ပ နိုင်ငံကသူ.ကိုသိတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အမြတ်တနိုး ချစ်ခင်လေးစားလာတဲ. ခေါင်းဆောင်ကေ
ာင်းတစ်ယောက်အကြောင်းသိတယ်ဆိုတာ စိတ်ချင်းတူသွားတော. အရမ်း Euphoria ဖြစ်သွားတာပေါ.နေ
ာ်။ရှမ်းလူမျိုးမှန်ရင် စ၀်ရွက်ဆစ်ကို သိကြမှာ ရှမ်းပြည်ပါမကပါဘူး ပြည်ထောင်စုကြီးနိုင်ငံသားများအားလုံး
ထိုအတူပဲ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်ကျောင်း ILBC တက်တုန်းကလဲ မေးတဲ.လူဆိုတာအများကြီးပဲ။ဗမာပြည်မှာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားခံရသလို ရှမ်းပြည်နယ်မှာလဲ စ၀်ရွက်ဆစ်ပာာ လေးစားထိုက်တန်တဲ.သူ
ပဲ။ခွန်ဆာခေတ်တုန်းက SSA ဆိုတာ ရှမ်းပြည်နယ်ကိုသူတို.တကယ်ဒီထောင်ဖို. မရှိပါဘူး စီးပွားရေးလုပ်
လိုက်နဲ. မိုက်မဲမူပဲ ပြိုင်ဆိုင်ကြတာ စစ်တပ်ဖွဲ.စည်းပုံ Construction လဲမကောင်းဘူး။ရှမ်းစစ်သား ရွာထဲဝင်
တာနဲ. ချက်ချင်းပဲ ရွာပျက် ရွာဆုတ်သွားတာ အဲတုန်းက လူသားတောင်ပြိုင်ပြီးစားကြတာ အဲတုန်းက MTA
ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမကောင်းလို.ပေါ.။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမကောင်းမှတော. အောက်ခြေ
တပ်သားတွေလဲ လုပ်ချင်သလိုလုပ် နိုင်ငံရေးကို စီးပွားရေးအဖြစ်ပြန်ပြောင်း။လက်နက်ကိုင်ပြီး ရည်မှန်းချ
က်မရှိလို. အဲလိုဖြစ်သွားတာ နောက်ဆုံးခွန်ဆာသေသွားတောင်မှ ဘာရောင်္ဂါနဲ.သေသွားမှန်းမသိဘူး။အခု
ခေတ် SSArmy ဆိုတာ ပြည်သူလူထုကို နံပါတ်တစ်ပဲ ကျွန်တော်က လူမျိုးကြည်.ပြီးပြောတာမပာုတ်ပါဘူး။
သွေးစကားပြောသလဲမပာုတ်ပါဘူး။အခုခေတ် နဲ. ပာိုတုန်းကခေတ်မတူဘူး ဘာဖြစ်လို.လဲသိလား ခေါင်းေ
ဆာင် Leader ကောင်းလို.ပေါ.။ကိုယ်.အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ပီသတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်အခုထိမြင်တွေ.
နေရတာတော. နံပါတ်တစ် စ၀်ရွက်ဆစ်ပဲ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှ Peace and Cease
Fire ဘယ်တော.မှမလုပ်ခဲ.ဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေး အရသာသိတာလွန်သွားတော. နောက်ဆုံးကြည်.လိုက်လေ
စိန်ကျော. အဖွဲ. ပြည်သူ.စစ် အဖွဲ.ဖြစ်သွားတာ အဲဒါသူတို.က လက်နက်ကိုင်ပြီး ပြည်သူလူထုစီက ပိုက်ဆံ
တောင်း ပြည်သူလူထုအတွက် ကောင်းတာတစ်ခုမှ မပာုတ်ဘူးနောက်ဆုံး သူတို.ပဲ တိုက်နဲ. ကားနဲ. ရည်မှ
န်းချက်မရှိတော.ဘူး ပျောက်သွားပြီ ၀မ်းပာိုင်း တောင်မှ ပြန်ထလာပြီး Revolution လုပ်ရဲ.သာပဲ။အဲဒါလဲ
ဂုဏ်ယူရမှာ မဆုံးပါဘူး။နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် ILBC ကျောင်းတက်တုန်းက ဆရာကကျွန်တော်.ကိုမေး
တယ် အဲဆရာက ကရင်လူမျိုး မင်း ဒေါ်စုနဲ. ဦးရွက်စစ် ဘယ်သူ.ကို ပိုပြီးတော. Prefer ဖြစ်သလဲလို.မေး
တော. ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို.ရှမ်းလူမျိုး အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ကြီး စ၀်ရွက်စစ်ကိုပဲရွေးမှာပေါ.။အဲ
ချိန်သူကဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော. မင်းမဆိုးဘူး မင်းမှန်တယ်တဲ. သူကဘာပြန်ပြောသလဲလို. ကျွန်တော်
နားထောင်ကြည်.တော. ပာုတ်တယ် မင်းပြောတာမှန်တယ်ကွာ ဒေါ်စု ဆိုတဲ. ပုဂ္ဂိုလ် ကသူမဲနိုင်ဖို. Vote
ပဲတိုင်းရင်းသားကိုသိတာ သူအလိုရှိမှ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ရှိတာတဲ. ကချင်စစ်မှာ သူဘာမှဝင်မပြောဘူး
အဲကြောင်. သူ.ကိုမကြိုက်ဘူး Discrimination လုပ်တယ်။အင် ပာုတ်တယ်သူပြောတာလဲမှန်တယ်။သူလဲ
နောက်ပိုင်း ဦးရွက်စစ်အကြောင်းမေးတယ် ပြီးတော. သူတို.ကရင်ခေါင်းဆောင်အကြောင်းပြန်ပြောပြတယ်
အင်ကျွန်တော်လဲ နောက်ပိုင်း ခေါင်းထဲဝင်လာတော.တယ်။ဒီလိုပါပဲနော် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအကြည်ညို
လေးစားတဲ.သူ နိုင်ငံတိုင်းရှိကြတာပဲနော်လို. ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်တော. စ၀်ရွက်စစ်ကိုအရမ်း
ကြိုက်တယ် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်လဲ ပီသတယ် စိတ်သဘောထားလဲ အရမ်းကောင်းတယ်။လက်အောက်ငယ်
တပ်သားတွေကို အော်ငေါက် တာမရှိဘူး။ Fairer ပဲသူက အဲကြောင်း ကျွန်တော်တို. ရှမ်းခေါင်းဆောင် စ၀်
ရွက်ဆစ်ကို မမြတ်နိုးသူ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူးလို. ကျွန်တောင်ထင်ပါတယ် သူသည် ကျွန်တော်တို. နောက်
တက်လာမယ်. လူငယ်များ ရှမ်းလူမျိုးများအတွက် စံပြ ဖြစ်သွားပါပြီ။လေးစားထိုက်တန်သူကို လေးစားရမှာ
တော. ပြည်သူလူထု တာဝန်ပါပဲ မနာလိုသူ(ဗမာအစိုးရ) တော.ကြိုက်မှာတော.မပာုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော် အ
တွေးထဲ စိတ်ထဲသည် စ၀်ရွက်ဆစ်သည် ကျွန်တော်.အတွက် အမြတ်ဆုံး တန်ဖိုးအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးပါပဲ
ရှမ်းဆောင်းခေါင်အများစုသည် ပိုက်ဆံရှိ မြို.ထဲ တိုက်တွေကားတွေ ပိုင်တော. မစွန်.လွတ်နိုင်ဘူး နောက်
ဆုံးလက်နက်ချ မချရင် ပြည်သူ.စစ်လုပ် အဲဒါသည် ပြည်သူလူထုအတွက်ရော ရှမ်းပြည်နယ်အပေါ်တွေပါ
သစ္စာဖောက်သမားတွေ ရှမ်းမြေပေါ်ကြီး ရှမ်းမြေကိုနေ ရှမ်းရေကိုသောက်ပြီး မျိုးရိုးချစ်စိတ်မရှိပဲနဲ. ခေါင်း
ဆောင်တစ်ဦးလုပ်တာ မမိုက်ပါဘူး။ ထမင် ပဲဝတ်ခိုင်းလိုက်ရင်အကောင်းဆုံးပဲ ပြည်သူလုထု အပေါ် တပ်
အပေါ်မှာ သစ္စာမရှိကြတဲ.လူတွေ။ဒါကြောင်.ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက ပြည်သူ.စစ်များ လက်နက်ချ ခေါင်းဆောင်
များအားလုံး စ၀်ရွက်ဆစ် လိုမျိုးစိတ် မွေးကြပါ ပြည်သူလူထုအပေါ်ပဲ ပိုက်ဆံကောက်စားပြီး ကိုယ်.မိန်းမ ကိုယ်.အတွက်ပဲ မသုံးမကြည်.ပါနဲ. အများအတွက် လုပ်ပေးပါ လက်နက်ဆိုတာ ပစ်မှ ကျည်ထွက်တာ မပစ်ရင် ကျည်မထွက်ဘူး အဲကြောင်း နိုင်ငံရေး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်တာ လက်နက်ဆိုတာ ပြည်သူလူ
ထုကိုသတ်ဖို. ပိုက်ဆံကောက်တောင်းပြီး ပြည်သူအတွက် မကောင်းတာတွေ လုပ်ဖို.မပာုတ်ပါဘူး။ဖြစ်နိုင်
ရင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း RCSS/SSA ခေါင်းဆောင် စ၀်ရွက်ဆစ် ကိုအတုယူကြပါ နိုင်ငံအပေါ်ကောင်းရ
င် လေးစားထိုက်တန်ရမယ် ပြည်သူလဲ ချစ်ခင်တယ် အဲကြောင်း စ၀်ရွက်ဆစ် လိုမျိုး အတုယူကြပါလို. ပြည်
သူ.စစ်များ လက်နက်ချ သမားများအားလုံး ကိုကျွန်တော် ပြောချင်ပါသည် အားလုံးပဲ မိုင်ဆွန်ခ။
ဗိုလ်နေ၀င်း လက်စဖျောက် သုတ်သင်တာ ခံလိုက်ရတဲ. သီပေါရှမ်းဘုရင်
12:11 AMSHANHISTORY No comments
သီပေါမြို့လုို့လူသိများတဲ့ မြောက်ပုိုင်းသျှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ မောသျှမ်းတောင်တန်းများ ပတ်လည်ဝန်းရံ အလှဆင်ထား သဖွယ် နံဘေးက တစိမ့်စိမ့် တလိမ့်လိမ့်နဲ့ ဒုတ္ဘ၀တီမြစ် ကလေးတစ်စင်းက ပတ်ချာ လည့်ကာ စီးဆင်းနေပြီး သာယာလွမ်းမော ဘယ်ကောင်းတဲ့ မောသျှမ်းလူမျိုးတုို့ရဲ သမုိုင်းအထင်ကရမြို့ လေးတမြို့ပါ ဒီသီပေါမြို့ ...လေးဟာ မြန်မာ့သမုိုင်း တလျှောက်မှာ နေရယူလျှက် ရှိနေပါတယ် သီပေါမြို့လေးဟာ မောကုိုး ပြည်ထောင် မှာ ပါဝင်ခဲ့သလုို့ ရှေးယခင် မြို့တည်ပြီးချိန်မှ စ၍ သျှမ်းစော်ဘွား အဆက်ဆက် ကနေ အဆင့်ဆင့် အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့မြို့လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သီပေါ မြို့လေးပေါ်ပေါက် လာရတဲ့အကြောင်းကလည်း သျှမ်းလူမျိုးတုို့၏ လန့်ကျောက်နုိုင်ငံတော် (ယခုတရုတ်ပြည်) ကုို သျှမ်းဘုရင်ခွန်လူဖုန်း အုပ်ချုပ်စုိုးနေချိန်မှာ ယခုသီပေါနယ်မှာ မိန်းတိမ်းခေါ် ဆုိုတဲ့မင်းဆက်ကုို သျှမ်းတွေက စတင်တည် ထောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် တိမ်းခေါ်မင်းဟာ ခွန်းလူး၊ ခွန်လှိုင်းဆုိုတဲ့ သားတော် နှစ်ပါးကုိုသာဖွားမြင်ခဲ့ပြီး နောက်ပုိုင်းမှာ မင်းဆက်ပြတ်သွားခဲ့ပါသည်။
ထုိုအချိန် တိမ်းခေါ်တုိုင်းပြည်ကြီးသည် မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရာက အမှတ်ကြီးလေးဦးက လေးနယ်စီခွဲပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကုို သျှမ်းတုို့က စီကော့လုို့ခေါ်ပါတယ် သီဆုိုတာက သျှမ်းလုို လေး ကော့ဆုိုတာ လူအရေအတွက် လူလေးယောက် အုပ်ချုပ်လုို့ ဆီကော့ လုို့ခေါ်ဆုိုတာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် စီကော့ စီကော့လုို့ ခေါ်ဆုိုရာက နောက်ပုိုင်း ဆီပေါက် သုို့ပြောင်းလည်းလာပါတယ် ဆီဆုိုတာက လေး
ပေါက်ဆုိုတာက ရပ်ကွက် ဒီလုိုနဲ့ ရပ်ကွက်လေးခု ဆီပေါက်လုို့ ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီဆီပေါက် ကနေပြီးတော့ ဆီပေါ့ ဆုိုပြီးတော့ အသွင်ကူးပြောင်း လာရာမှ နောက်ဆုံးမှာ သီပေါ ရယ်လုို့ခေါ်ဆုိုခဲ့ကြပါသည်။(မယ်ခူးခေးရှဲန်)
တဖန် ကုန်းဘောင်ခေတ် မြန်မာ့ရာဇာဝင်မှာတော့သီပေါမြို့ကုို အုန်းဘောင်လုို့ခေါ် ဆုိုရေးမှတ်ခဲ့ကြပြီး အုန်းဘောင်သီပေါလုို့ ခေါ်ဆုိုကြပြန်ပါတယ်AD - 1534 အင်းဝနေပြည်တော်ကုို မုိုးညှင်းဘုရင် စ၀်လုံနှင့်သား ၀င်ရောက်သိမ်းပုိုက်ကာ သားဖြစ်သူ သုိုဟန်ဘွားကုို မင်းအဖြစ်ထားရာက ပြည်မြို့ စား မင်းကြီးရန်နောင်နှင့် အတူ အုပ်ချုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ AD- 1555 အရောက် မှာတော့ သုိုဟန်ဘွားကုို မင်းကြီးရန်နှောင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး သီပေါမြို့ကုိုအပုိုင်စားတဲ့ သီပေါစော်ဘွား အုန်းဘောင်ခွန်မင်း ကုို နန်းတင်ကြတယ်လုို့ မြန်မာ့မှန်နန်းက ဆုိုပါတယ် အုန်းဘောင်သီပေါ လုို့ရေးတခါ မှတ်ကြပြန်ပါတယ်။
အုန်းဘောင်ဆုိုတာကတော့ သျှမ်းလုို အွန်ပွန်းလုို့ခေါ်ပါတယ် အွန်ပွန်းဆုိုတာက လယ်တွေကုို ရေသွင်းဖုို့ နမ္မတူမြစ်ကနေ ရေသွယ်ယူကာ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေတဲ့ ရေလွဲမြောင်းအသေးလေးတွေကုို ဆုိုလုိုပါသည်။ သီပေါမြို့သည် တချိန်က ဆန်ရေစပါး ပေါကြွယ်ဝသော နေရာဖြစ်သလုို ရေလွဲဆည်တွေ အများအပြားနှင့် လယ်ယာစုိုက်ပျိုး အုပ်ချုပ်သော စော်ဘွားဖြစ်တာကြောင့် သျှမ်းတုို့က အွန်ပွန်း စ၀်ဖှ လုို့ခေါ်ပါတယ် ဒါကုို ဗမာလူမျိုးများက အုန်းဘောင် စော်ဘွား ခေါ်ဆုိုရေးမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒီလုိုနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက် သျှမ်းစော်ဘွားများ အုပ်ချုပ်လာခဲ့ရာ ...
AD- 1866 - Dec 13 သီပေါစော်ဘွားကြီး ခွန်ကြာထွန်း၏ သားတော် ကမ္ဘောဇရဋ္ဌ မဟာဝံသ သိရီပ၀ရ သုဓမ္မရာဇာ ဘွဲ့ရ (၈၅) ဆက်မြောက် စော်ဘွားကြီး အဖြစ်ကုို စ၀်ကြာခိုင် (ခ) စ၀်ခွန်ဆိုင် သီပေါ စော်ဘွား အဖြစ်ကုိုခံယူလေသည်။ 1889 ခုနှစ်မှာ ( C. I.E = Companion of the Order of tha Indian Empire ) ဆုိုကုိုရရှိခဲ့သည်။
AD- 1895 ခုနှစ်မှာ စော်ဘွားကြီး စ၀်ကြာခုိုင်သည် ကြေးချိန် - ၄၇၇၉ ပိဿာ-၁၅ ကျပ်သား ၊ ငွေချိန် - ၂၆ ပိဿာ ၊ ရွှေချိန် - ၂ ပိဿာ-၂၅ ကျပ်- ၂ ပဲ ၊ စရိတ်တော် (ငွေဒင်္ဂါး) ၉၅၅၈ - ကျပ်- ၆ ပဲ ၊တို့ဖြင့် သွန်းလောင်းပူဇော်ခဲ့ပါသည်။ ၁၂၆၄ - ခုနှစ်တွင် မဟာမြတ်မုနိ မကိုဋ်တော်ကို တင်လှူခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးနှင့် နောင်တော် ညီတော်အဖြစ် အနီးစပ်ဆုံး ပုံစံတူကူးယူ၍ မြေတိုင်းအမတ်ကြီး ဦးကြိုင်ကို ပန်းတဉ်းဝန်ခန့်ကာ ဂန္ဓကုဋိတိုက်တော်၊ ပြာသာဒ် စုလစ်မွန်းချွန်၊ အာရုံခံတန်ဆောင်း တို့ဖြင့် ၁၂၅၇-ခု ၀ါဆိုလပြည့်ကျော် (၅) ရက်နေ့တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
AD- 1924 ခုနှစ် ၁၂၈၆ - ခု ကဆုန်လဆန်း (၆) ရက်နေ့တွင် တန်ဆောင်းတော် မီးလောင်ကျွမ်း၍ ရုပ်ပွားတော်မြတ်မှာ အနည်းငယ်မီးခခဲ့ပါသည်။ သီပေါ အုန်းဘောင် လေးမြို့ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ဦးက၀ိ မထေရ်မြတ်နှင့် အရီးတော်ထိပ်ခေါင်တင် ကြီးမှူးလျက် ပြည်သူပြည်သားများ ကောင်းမှုဖြင့် ၁၂၈၉ - ခု ပြာသိုလပြည့်နေ့တွင် ပြန်လည်ပြုပြင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
စ၀်ချယ် (1906 - 1928) စ၀်ချယ်ကုို 1872 ခုနှစ်တွင်ဖွားမြင်ပြီး သီပေါမင်း၏ ခေါ်သီပေါမင်း၏ ခေါ် ဆုိုချက်အရ မန်းလေး ရွှေနန်းတော်တွင် သွားရောက်နေထုိုင်ခဲ့သည်။ 1913 Apri (၈၆)ဆက်မြောက် ကမ္ဘောဇရဋ္ဌ မဟာဝံသ မဟာရာဇာ ဘွဲ့ခံ စော်ဘွားကြီး ဆာစောချယ် အဖြစ်သုို့ရောက်ရှိသည်။
AD- 1923 စော်ဘွားကြီး စ၀်ချယ် ၏မွေးနေ့ပွဲတွင် ( C. I.E = Companion of the Order of tha Indian Empire ) ဆုိုကုိုရရှိခဲ့သည်။
စ၀်အုံကြာ(1928-1938) စ၀်ချယ် နှင့် မဟာဒေ၀ီ စ၀်သီရိမာလာတုို့၏ တဦးတည်းသော သား ( Rugby School ) (Brasennoso College Oxford ) 1917 BA 1922 (Ma) 1917 - 1919 (South Eastrn Agricultural )
1919 Dec မှာ ( Honorary Extea Assistant Commission for administrativ training မကွေးမြို့မှာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ 1922 ခုနှစ် စ၀်သုန္ဒ ၏သမီးတော် မဟာဒေ၀ီ စ၀်လိ နှင့်ထိမ်းမြားသည်။
သီးပေါ စော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်သည်သီပေါ စော်ဘွားကြီး စ၀်အုံကြာနှင့်မဟာ ဒေ၀ီ တို့မှ 1924 ဖွားမြင်တော်မှုပြီး မွေးချင်းများ ဖြစ်ကြသော စ၀်ကြာဆုန်၊ စ၀်မမ၊ စ၀်ကြည်စု၊ စ၀်ယဉ်နုတို့၏ မောင်အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။1932 – 1935မေမြို့ ဂျိုးဇက်ကျောင်းတွင် (St.Joseph) ပညာ သင်ကြား၍1935 – 1941သျှမ်း ချိ့စ်ကျောင်းတွင်၎င်း( Shan Chief` School)။ 1941 ခနှစ်တွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်းမောင်မြင်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တာဂျီလိန် (St. Paul)၎င်း ဆက်လက်၍( Senior Cambridge)။ 1947 (January) သီပေါစော်ဘွားဖြစ်ကို ခံယူလေသည်။ 1949 (October) ထိုနောက် အမေရိကန်(Colorado) ပညာသင်ကြား။ 1953 (Mining Engineer)။ 1953 (March) (Austria) (Inge)အင်ဂျီးနှင့်တွေ့ဆုံ 1954 (January) စ၀်ကြာဆိုင်သည် အင်ဂျီး(Inge)နှင့်အတူ သီပေါ သို့ပြန်လည် ရာက်ရှိလာသည်။ အနာဂတ် သျှမ်းပြည်တွက် ဆားရရှိရန် ဘောကြိုဒေသမှ ဆားထွက်ရှိသည့် ဒေသတို့ ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း လေ့လါ သုတေသန များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘော်ကြိုဘုရားပွဲတွင် သျှမ်းအမျိုးသားများသည် အလေါင်းအစား ခုံမင်းနှစ်သက်သည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိ၍ နောင်အနှစ်ပွဲတော် ကျင်းပချိန်တွင် ဘော်ကြို ဘုရားပွဲတော်တွင်း အလေါင်းစားများ ပြုလုပ်ခြင်းများ ပိတ်ပင်သည်ဟု သိရှိပါသည်။ စော်ဘွားကြီး စ၀်ကြာဆိုင်သည် သျှမ်းအမျိုးသားများ ချစ်ခင်လေးခြင်း ယုံကြည်ကိုးစားခံရသော စော်ဘွားတဦးဖြစ်သည်
1948 ခုနှစ် မိုင်းရှုးစော်ဘွား စ၀်မန်ဖ၏ နေအိမ်တွင် စော်ဘွားကြီးများ တံခါးပိတ်အစည်းဝေး၌ ပထမ အချက်ဖြစ်သည့် သျှမ်းပြည်ပြည်သူ့ အစိုးရသို့ အာဏာစွန့်လွှတ်ရေးဆိုသည်ကို အားလုံးလိုလို လက်ခံခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာရာဂျာ ( ) စော်ဘွားများသည် ပင်၎င်းတို့၏ အာဏာကို အစိုးရထံသို့ ပေးအပ်စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ် သောကြောင့်ပင်။ ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှမ်းထူးခြားစွာ ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟုလည်းေ ကြာင်းပြုကြသည်။
ဒုတိယ- အချက်ဖြစ်သည့် လျော်ကြေးငွေယူရန် မယူရန်ကို မှု အငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့ကြ၏ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး စ၀်မန်ဖက ဖြစ်နိုင်လျှင် လျော်ကြေးငွေကို မယူရန်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ နောင်သောအခါတွင် သျှမ်းပြည်၏ ပြည်သူလူထု သားစဉ်မြေးဆက်တို့ အနေဖြင့် သျှမ်းပြည်ကြီးကို သျှမ်းစော်ဘွားများက ငွေကြေးဖြင့် လဲလှယ်၍ ရောင်းစားသွားခဲ့ကြသည်ဟူသော သမိုင်းအမည်း စက်ကြီးစွန်းထင်းကျန်ရစ် နေခဲ့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပေသည်။ ထိုအဆိုတင်သွင်းချက်ကို သီပေါ စော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်နှင့် အချို့သော စော်ဘွားငယ် (နယ်ငယ်သောစော်ဘွားများကိုဆိုလိုသည်) များတဦး နှစ်ဦးခန့်ကသာ ထောက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
သီးပေါ စော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်နှင့် အင်ဂျီ တဖြစ်လည်း မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီ သျှမ်းမင်းသမီးလေး သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ ဇတ်လမ်းလေးက.. တကယ့်ကို ပုံပြင်ဆန် ပြီး ကြည်နူးဖွယ်..ကြေကွဲဖွယ်တွေ အတိနဲ့ပါ။ အချိန်က..၁၉၅၁ ခုနှစ်။ ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ်ရဲ့ ဒန်ဗာ ဆိုတဲ့မြို့လေးက Colorado School of Mines မှာ.. ကျောင်းလာတက်ကြတဲ့..အာရှတိုက်သား မိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားလေး နဲ့ exchange student အနေနဲ့ ခဏ ရောက်နေတဲ့ သြစကြီးယား နိုင်ငံသူလေး တို့ ချစ်ခင်စုံမက်သွားကြတဲ့.. သာမာန် အချစ်ဇတ်လမ်းလေး တခုပါပဲ။
အင်ဂျီ ကို ၁၉၃၂ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ရက်နေ့တွင် သြစတြီးယားနိုင်ငံ၊ Kärntenဒေသတွင် မွေးဖွါးခဲ့သည်။ ၆နှစ်သမီး အရွယ်တွင် နာဇီကျူးကျော်မှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ သူမ၏ အမေကိုယ်တိုင် နာဇီများ၏ ဖမ်းဆီးမှုကို သုံးကြိမ်ခံခဲ့ ရဖူးသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး သြစတြီးယားနိုင်ငံမှာ များစွာ ခက်ခဲဆင်းရဲ လာသောကြောင့် အမေရိကန်တွင် ပညာဆက်လက် သင်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၁ခုနှစ်တွင် Fulbright ပညာသင်ဆုရရှိသူ ပထမဆုံးသော သြစတြီးယားလူမျိုး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒို၊ အမျိုးသမီး ကောလိပ်တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ အဲဒီတုန်းက..ကျောင်းအုပ်ကြီးကလွဲလို့.. ဒီ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားလေးဟာ အာရှတိုက်က.. ဘုရင်ငယ်လေး တပါး ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိစေအောင်..သူကိုယ်တိုင်က..သိုဝှက်ထားခဲ့တယ်တဲ့။ ကော်လိုရာဒိုတွင် ပညာဆည်းပူးနေစဉ် Colorado school of Mining မှ မိုင်းတူးအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား သီပေါစော်ဘွား စဝ်ကြာဆိုင်နှင့် ဖူးစာဆုံခဲ့ကြသည်။
၁၉၅၃-ခုနှစ်တွင် ကော်လိုရာဒိုရှိ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးအိမ်တွင်ပင် လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ ၂ယောက် လက်ထပ်ပြီးတော့.. အင်ဂျီက..ယောင်နောက်ဆံထုံးပါ.. လိုက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့ သဘောင်္ကြီး ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းကို ကပ်ကာနီးလို့ .. အလံတွေ ပုဝါတွေ တရမ်းရမ်း..ဗုံမောင်းသံ တညံညံ နဲ့ ဆိပ်ကမ်းပြည့် ကြိုနေကြတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေကို မြင်တော့မှ…. “There is something I have to tell you, my dear.” လို့ ပြောလိုက်တဲ့..ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ… သူမဘ၀ဟာ အရှင်လတ်လတ်ကနေပြီး.. မင်းသမီးတပါး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး…ပြိုင်တည်းမှာပဲ..ရှုပ်ထွေးလာနိုင်မဲ့ သူ့ အနာဂါတ်ကိုလည်း အာရုံရမိလိုက်တယ်..လို့.. အင်ဂျီက လွမ်းဆွတ် ထားပါတယ်။ သီပေါသို့ ရောက်ရှိပြီး လအတန်ကြာတွင် တရားဝင်ရိုးရာ လက်ထပ်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဗေဒင်နက္ခတ်အရ မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီ ဟူသော ရှမ်းအမည်ကို ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ မောင်နှံ သီပေါ ဟော်နန်းကို ရောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး..အဲဒီ နယ်တခွင်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးတွေ ဖြစ်လာ တော့တယ်။ စပ်ကြာဆိုင်က..သူကိုယ်တိုင် လူဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေရှင်ပဒေသရာဇ် စနစ်ကြီး ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားရင်း..
သူ့ရဲ့ ရှမ်းအမျိုးသားတွေကို ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီ လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်။ မြေယာတွေ ကို ပြည်သူ့ဆီ ပြန်ရောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ သူသင်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေနဲ့..ဒီဒေသ ရဲ့ အသက်သွေးကြော..တွင်းထွက် သယံဇာတတွေ ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်။
သြစတြေလျ နိုင်ငံက..ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်တွေ ငှားပြီး တိုင်းတာ ရှာဖွေရေး တွေကို အကောင်းဆုံးအဆင့် နဲ့လုပ်တယ်..။ နိုင်ငံခြားက..မျိုးစိတ်အသစ်တွေ ၀ယ်ယူပြီး.. စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေကို..စက်မူ နည်းပညာတွေနဲ့ မြှင့်တင်ပေးခဲ့တယ်။ စဝ်သုစန္ဒီသည် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ဗမာ၊ ရှမ်း ဘာသာစကားများကို သင်ယူ တတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး မိမိကိုယ်ကို ရှမ်းလူမျိုး တစ်ဦးအဖြစ် စတင်ခံယူလာခဲ့သည်သာကမ၊ သီပေါဒေသခံများကလည်း သူမအား ရှမ်းလူမျိုး မဟာဒေဝီ တစ်ဦးအဖြစ် လက်ခံလာကြသည်။
ထို့အပြင် စဝ်သုဒေဝီသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် တွဲဖက်ကာ သီပေါဒေသ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့ပြီး သားဖွားဆေးခန်းနှင့် ဗမာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ရှမ်း ဘာသာသုံးမျိုးဖြင့် သင်ကြားသော စာသင်ကျောင်း ကိုတည်ထောင်ရင်း ကိုယ်တိုင် လုပ်အားပေးခဲ့သည်။ မာယာရီ နှင့် ကိန္နရီ အမည်ရှိ သမီးနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ အင်ဂျီ ကိုယ်တိုင်လည်း စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ တွေကို ကိုယ်ဖိ ရင်ဖိ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ ဗမာလုံခြည်နဲ့ ဆံထုံးနဲ့ နေထိုင် ဆင်ယင်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ တဖြစ်လဲ သုစန္ဒီမင်းသမီးကို အားလုံးက.. အလေးထား လေးစားခင်မင်ကြတယ်။ အဲဒီ ရပ်ရွာတွေမှာဆို.. သူတို့ မောင်နှံပုံကို ဘုရားစင်မှာတင်ပြီး ကိုးကွယ်တာမျိုးတောင် ရှိခဲ့တယ်တဲ့။
ဒါပေမဲ့.. လူကောင်းလူတော် တွေကို ၀မ်းပမ်းတသာ ကြိုဆို လက်ခံလေ့ မရှိတဲ့..ဒီမြေ..ဒီရေ..ဒီထုံး.. ဒီအမုန်းတွေနဲ့ အတူ ၁၉၆၂ ခု နှစ် မတ်လ ရဲ့ နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်း ထဲမှာပဲ..ရန်ကုန်မြို့လွှတ်တော်ညီလာခံ က အပြန် ဘယ်မှာ ပျောက်ဆုံး သွားမှန်း မသိတဲ့ သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် ကို ယနေ့ထက်ထိ ဘယ်သူမှ ပြန်မတွေ့ကြရတော့ပါဘူး။
အဲဒီ အချိန်မှာ လူမမယ် သမီး ၂ယောက်နဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ ကို သီပေါ ဟော်မှာပဲ.. အစောင့်အကြပ် ထူထပ်စွာ နဲ့ အကျယ်ချုပ် ထားခဲ့တယ်။ ဘာကိုမှ မကြောက်တတ်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ ကလည်း.. သူ့ဆက်သွယ်နိုင်သမျှ အရာရှိ စစ်အာဏာပိုင် မှန်သမျှ ထံ လိုက်လံ စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့.. “I am writing this secretly. I am being locked up in the army lockup at Ba Htoo Myo at Lawksawk… Miss you all. Conditions here are not clean. Hope to see you soon. Cheer up yourself! I am still OK. Love, Sao Kya Seng.” ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်စွာ ရောက်လာတဲ့. စာလေးတစောင်က လွဲလို့.. ဘာသဲလွန်စ မှ မရခဲ့တော့ဘူး။
၂ နှစ်လောက်.. အားမလျှော့တမ်း စုံစမ်း နေခဲ့ရင်း.. နောက်ဆုံးမှာတော့. .သူ့အတွက် အန္တရယ်တွေ ၀ိုင်းနေတဲ့..တစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်.. သြစကြီးယားသံရုံးရဲ့ အကူအညီနဲ့ သမီးလေး ၂ ယောက်အတွက် နိုင်ငံကူးလတ်မှတ် အတု လုပ်ပြီး မြန်မာနိင်ငံထဲက..ခိုးထွက် လာခဲ့တော့တာ..ကနေ့အထိ..အခု စာအုပ်ကို ရေးသားဖြစ်တဲ့ အထိပေါ့။
သီပေါစော်ဘွားစောဝ်ကြာဆိုင်ဟာ.. ၁၉၆၂ခုနှစ် စစ်အာဏာ အသိမ်းမှာ တခြားသော.. တိုးတက် ထက်မြတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် များနည်းတူ.. လက်စဖျောက် ခံခဲ့ရပြီးနောက် အင်ဂျီ တဖြစ်လဲ သုစန္ဒီမင်းသမီးလေး ဟာသမီးငယ် နှစ်ယောက်နှစ်အတူ မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွါလာခဲ့ရပါသည်။ သြစကြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့Schloss Laudon ဆိုတဲ့ ဇိမ်ခံ ဟော်တယ်ကြီး တခုရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲကို နောက်ဆုံးသော မျှော်လင့်ချက်တွေ.. နာကျည်းမူတွေ နဲ့ အတူ သမီးလေး ၂ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး ဟော်တည်ရှေ့ မျက်ခင်းစိမ်းစိမ်းကို ဖြတ်၍ အထဲသို့ ၀င်လာတဲ့.. အမျိုးသမီးငယ် တယောက် အဲဒီ အမျိုးသမီးကတော့..တချိန်တုန်းက.. ရပ်ရွာလူထု က..ချစ်ခင်လေးစားခဲ့ကြတဲ့.. ရှမ်းမင်းသမီးတပါး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ..သြစကြီးယားနိုင်ငံသူ အင်ဂျီ ဖြစ်ပြီး.. သူလက်ဆွဲလာတဲ့ ကလေး ၂ယောက်ကတော့.. ကိန္ဒရာ နဲ့ အမရာ (ကိန္ဒရီ နဲ့ မာယာရီ) ဆိုတဲ့ ရှမ်း-သြစကြီးယန်း ကပြား သမီးလေး ၂ယောက်ပါ။ သူတို့ တွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူကတော့.. လန်ဒန်မြို့မှာ ဇိမ်ခံ ရင်း ..ဆေးကုဖို့ ရောက်နေတဲ့..မြန်မာပြည်က..ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးနေ၀င်း (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌ) ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်အပျက်တွေက..ဆယ်စုနှစ် ကြာနေပြီ ဖြစ်ပေမဲ့.. အင်ဂျီ မှာ..သူ့ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ကံကြမ္မာ ဘယ်လို အဆုံးသပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာ..သိဖို့အတွက်..ဇွဲမလျော့ပဲ တောက်လျှောက် ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ အခုလည်း.. သတ္တိတွေ အပြည့်နဲ့ လူကိုယ်တိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင် မေးဖို့..သူ ရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။
ဒါပေမဲ့..အခန်းထဲက..ထွက်မလာတဲ့..တာဝန်ရှိသူကြီးက.. သူ့ဇနီး ဒေါ်ခင်မေသန်းကို လွှတ်ပြီး..စပ်ကြာဆိုင် မသေသေးပါဘူး..ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေပါတယ် လို့.. အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအဖြေ စကားက..အခြေအမြစ်မရှိ သလို ဘယ်ကိုမှ ဆက်သွားစရာလည်း မရှိတော့တဲ့.. ငရဲကလာတဲ့ အလိမ်အညာ လမ်းဆုံးစကားတခုသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ..သူသိပေမဲ့.. အခု ထက်ထိလည်း..သူ့ခင်ပွန်း အလောင်း ကို မတွေ့ခဲ့ရ။ တကယ်တော့.. ငယ်ရွယ် ထက်မြတ်တဲ့ သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် ဟာ.. ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာ အသိမ်းမှာ တခြားသော.. တိုးတက် ထက်မြတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များနည်းတူ.. လက်စဖျောက် ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီစာအုပ်ကို ဒုတိယ အိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အားပေးတိုက်တွန်းမူ နဲ့ ရေးသားထုတ်ဝေ ခဲ့တာဖြစ်ပြီး..အလင်းရောင် ပျောက်ကွယ်ရင်း..မှောင်စပြုနေတဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ ဖိနှိပ်ကန့်သတ်မူတွေကို ကမ္ဘာက သိအောင်..နောက်..သူ့ခင်ပွန်းစပ်ကြာဆိုင် ရဲ့ သူ့မြေသူ့ရေ အပေါ် တာဝန်ကျေခဲ့ပုံ.. နိုင်ငံရေး အမြင်ကျယ်ခဲ့ပုံတွေ..လူသားဆန်ခဲ့ပုံတွေကို မှတ်တင်းတင် ရစ်ဖို့ပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ၁၉၉၄ မှာ ဟာဝိုင်ယီတက္ကသိုလ် စာအုပ်တိုက်က..ပုံနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့ အတွင်းအဖုံးမှာ အမေရိကန်မှာ အခြေချ နေထိုင်နေတဲ့.. စာရေးသူ -အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာမ ကြီး အင်ဂျီရဲ့ မဟာနဖူး ဆံထုံး မြင့်မြင့်ကြီးနဲ့ ဓါတ်ပုံ ကို ကြက်သရေ ရှိစွာ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ Burma lifeline ဆိုတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတခုကိုလည်း အင်ဂျီနဲ့ သူ့ဒုတိယခင်ပွန်းက မတည်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် နဲ့သြစကြီးယားသူ အင်ဂျီ တို့ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်း။
11:57 PMSHANHISTORY No comments
စာအုပ်ရဲ့ အဖွင့်မှာ- (သြစကြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့Schloss Laudon) ဆိုတဲ့ ဇိမ်ခံ ဟော်တယ်ကြီး တခုရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲကို နောက်ဆုံးသော မျှော်လင့်ချက်တွေ.. နာကျည်းမူတွေ နဲ့ အတူ သမီးလေး ၂ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး ၀င်လာတဲ့.. အမျိုးသမီးငယ် တယောက် နဲ့ စထားပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးသမီးကတော့..တချိန်တုန်းက.. ရပ်ရွာလူထု က..ချစ်ခင်လေးစားခဲ့ကြတဲ့.. ရှမ်းမင်းသမီးတပါး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ..သြစကြီးယားနိုင်ငံသူ အင်ဂျီ ဖြစ်ပြီး.. သူလက်ဆွဲလာတဲ့ ကလေး ၂ယောက်ကတော့.. (ကိန္ဒရီ နဲ့ မာယာရီ) ဆိုတဲ့ ရှမ်း-သြစကြီးယန်း ကပြား သမီးလေး ၂ယောက်ပါ။ သူတို့ တွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူကတော့.. ဥရောပါမှာ ဇိမ်ခံ ရင်း ..ဆေးကုဖို့ ရောက်နေတဲ့..မြန်မာပြည်က..ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးနေ၀င်း ဖြစ်ပါသတဲ့။
အဖြစ်အပျက်တွေက.. နှစ်လေး ငါး ဆယ်နှစ် ကြာနေပြီ ဖြစ်ပေမဲ့.. အင်ဂျီ မှာ..သူ့ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ကံကြမ္မာ ဘယ်လို အဆုံးသပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာ..သိဖို့အတွက်..ဇွဲမလျော့ပဲ တောက်လျှောက် ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ အခုလည်း.. သတ္တိတွေ အပြည့်နဲ့ လူကိုယ်တိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင် မေးဖို့..သူ ရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့..အခန်းထဲက..ထွက်မလာတဲ့..တာဝန်ရှိသူကြီးက.. သူ့ဇနီး ဒေါ်ခင်မေသန်းကို လွှတ်ပြီး..စပ်ကြာဆိုင် မသေသေးပါဘူး..ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေပါတယ် လို့.. အဖြေပေးလိုက်သတဲ့။
ဒီအဖြေ စကားက..အခြေအမြစ်မရှိ သလို ဘယ်ကိုမှ ဆက်သွားစရာလည်း မရှိတော့တဲ့.. ငရဲကလာတဲ့ အလိမ်အညာ လမ်းဆုံးစကားတခုသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ..သူသိပေမဲ့.. အခု ထက်ထိလည်း..သူ့ခင်ပွန်း အလောင်း ကို မတွေ့ခဲ့ရ။
တကယ်တော့.. ငယ်ရွယ် ထက်မြတ်တဲ့ သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် ဟာ.. ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာ အသိမ်းမှာ တခြားသော.. တိုးတက် ထက်မြတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များနည်းတူ.. လက်စဖျောက် ခံခဲ့ရတာပါ။
သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ ဇတ်လမ်းလေးက.. တကယ့်ကို ပုံပြင်ဆန် ပြီး ကြည်နူးဖွယ်..ကြေကွဲဖွယ်တွေ အတိနဲ့ပါ။
အချိန်က..၁၉၅၁ ခုနှစ်။ ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ်ရဲ့ ဒန်ဗာ ဆိုတဲ့မြို့လေးက Colorado School of Mines မှာ.. ကျောင်းလာတက်ကြတဲ့..အာရှတိုက်သား မိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားလေး နဲ့ exchange student အနေနဲ့ ခဏ ရောက်နေတဲ့ သြစကြီးယား နိုင်ငံသူလေး တို့ ချစ်ခင်စုံမက်သွားကြတဲ့.. သာမာန် အချစ်ဇတ်လမ်းလေး တခုပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက..ကျောင်းအုပ်ကြီးကလွဲလို့.. ဒီ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားလေးဟာ အာရှတိုက်က.. ဘုရင်ငယ်လေး တပါး ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိစေအောင်..သူကိုယ်တိုင်က..သိုဝှက်ထားခဲ့တယ်တဲ့။
သူတို့ ၂ယောက် လက်ထပ်ပြီးတော့.. အင်ဂျီက..ယောင်နောက်ဆံထုံးပါ.. လိုက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့ သဘောင်္ကြီး ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းကို ကပ်ကာနီးလို့ .. အလံတွေ ပုဝါတွေ တရမ်းရမ်း..ဗုံမောင်းသံ တညံညံ နဲ့ ဆိပ်ကမ်းပြည့် ကြိုနေကြတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေကို မြင်တော့မှ.... "There is something I have to tell you, my dear." လို့ ပြောလိုက်တဲ့..ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ... သူမဘ၀ဟာ အရှင်လတ်လတ်ကနေပြီး.. မင်းသမီးတပါး ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီး....တပြိုင်တည်းမှာပဲ..ရှုပ်ထွေးလာနိုင်မဲ့ သူ့ အနာဂါတ်ကိုလည်း အာရုံရမိလိုက်တယ်..လို့.. အင်ဂျီက လွမ်းဆွတ် ထားပါတယ်။
သူတို့ မောင်နှံ သီပေါ ဟော်နန်းကို ရောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး..အဲဒီ နယ်တခွင်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးတွေ ဖြစ်လာတော့တယ်။ စပ်ကြာဆိုင်က..သူကိုယ်တိုင် လူဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေရှင်ပဒေသရာဇ် စနစ်ကြီး ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားရင်း..သူ့ရဲ့ ရှမ်းအမျိုးသားတွေကို ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီ လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်။ မြေယာတွေ ကို ပြည်သူ့ဆီ ပြန်ရောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ သူသင်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေနဲ့..ဒီဒေသ ရဲ့ အသက်သွေးကြော..တွင်းထွက် သယံဇာတတွေ ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်။ သြစတြေလျ နိုင်ငံက..ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်တွေ ငှားပြီး တိုင်းတာ ရှာဖွေရေး တွေကို အကောင်းဆုံးအဆင့် နဲ့လုပ်တယ်..။ နိုင်ငံခြားက..မျိုးစိတ်အသစ်တွေ ၀ယ်ယူပြီး.. စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေကို..စက်မူ နည်းပညာတွေနဲ့ မြှင့်တင်ပေးခဲ့တယ်။ အင်ဂျီ ကိုယ်တိုင်လည်း စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ တွေကို ကိုယ်ဖိ ရင်ဖိ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ ဗမာလုံခြည်နဲ့ ဆံထုံးနဲ့ နေထိုင် ဆင်ယင်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ တဖြစ်လဲ သုစန္ဒီမင်းသမီးကို အားလုံးက.. အလေးထား လေးစားခင်မင်ကြတယ်။ အဲဒီ ရပ်ရွာတွေမှာဆို.. သူတို့ မောင်နှံပုံကို ဘုရားစင်မှာတင်ပြီး ကိုးကွယ်တာမျိုးတောင် ရှိခဲ့တယ်တဲ့။
ဒါပေမဲ့.. လူကောင်းလူတော် တွေကို ၀မ်းပန်းတသာ ကြိုဆို လက်ခံလေ့ မရှိတဲ့..ဒီမြေ..ဒီရေ..ဒီထုံး..ဒီအမုန်းတွေနဲ့ အတူ ၁၉၆၂ ခု နှစ် မတ်လ ရဲ့ နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်း ထဲမှာပဲ..ရန်ကုန်မြို့လွှတ်တော်ညီလာခံ က အပြန် ဘယ်မှာ ပျောက်ဆုံး သွားမှန်း မသိတဲ့ သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် ကို ယနေ့ထက်ထိ ဘယ်သူမှ ပြန်မတွေ့ကြရတော့ပါဘူး။
အဲဒီ အချိန်မှာ လူမမယ် သမီး ၂ယောက်နဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ ကို သီပေါဟော်မှာပဲ..အစောင့်အကြပ် ထူထပ်စွာ နဲ့ အကျယ်ချုပ် ထားခဲ့တယ်။ ဘာကိုမှ မကြောက်တတ်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ ကလည်း..သူ့ဆက်သွယ်နိုင်သမျှ အရာရှိ စစ်အာဏာပိုင် မှန်သမျှ ထံ လိုက်လံ စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့.. "I am writing this secretly. I am being locked up in the army lockup at Ba Htoo Myo at Lawksawk... Miss you all. Conditions here are not clean. Hope to see you soon. Cheer up yourself! I am still OK. Love, Sao Kya Seng." ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်စွာ ရောက်လာတဲ့..စာလေးတစောင်ကလွဲလို့..ဘာသဲလွန်စ မှ မရခဲ့တော့ဘူး။
၂ နှစ်လောက်..အားမလျှော့တမ်း စုံစမ်း နေခဲ့ရင်း..နောက်ဆုံးမှာတော့..သူ့အတွက် အန္တရယ်တွေ ၀ိုင်းနေတဲ့..တစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်.. သြစကြီးယားသံရုံးရဲ့ အကူအညီနဲ့ သမီးလေး ၂ ယောက်အတွက် နိုင်ငံကူးလတ်မှတ် အတု လုပ်ပြီး မြန်မာနိင်ငံထဲက..ခိုးထွက် လာခဲ့တော့တာ..ကနေ့အထိ..အခု စာအုပ်ကို ရေးသားဖြစ်တဲ့ အထိပေါ့။
ဒီစာအုပ်ကို ဒုတိယ အိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အားပေးတိုက်တွန်းမူ နဲ့ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး..အလင်းရောင် ပျောက်ကွယ်ရင်း..မှောင်စပြုနေတဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ ဖိနှိပ်ကန့်သတ်မူတွေကို ကမ္ဘာက သိအောင်..နောက်..သူ့ခင်ပွန်းစပ်ကြာဆိုင် ရဲ့ သူ့မြေသူ့ရေ အပေါ် တာဝန်ကျေခဲ့ပုံ.. နိုင်ငံရေး အမြင်ကျယ်ခဲ့ပုံတွေ..လူသားဆန်ခဲ့ပုံတွေကို မှတ်တင်းတင် ရစ်ဖို့ပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ၁၉၉၄ မှာ ဟာဝိုင်ယီတက္ကသိုလ် စာအုပ်တိုက်က..ပုံနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့ အတွင်းအဖုံးမှာ အမေရိကန်မှာ အခြေချ နေထိုင်နေတဲ့.. စာရေးသူ -အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာမ ကြီး အင်ဂျီရဲ့ မဟာနဖူး ဆံထုံး မြင့်မြင့်ကြီးနဲ့ ဓါတ်ပုံ ကို ကြက်သရေ ရှိစွာ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ Burma lifeline ဆိုတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတခုကိုလည်း အင်ဂျီ နဲ့ သူ့ဒုတိယခင်ပွန်းက မတည်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မူရင်း >>>> http://www.myhero.com/go/hero.asp?hero=Inge_Sargent
11:13 PMTAI WALLPAPER'S No comments
ရှမ်း Wallpaper Computer မှာ အသုံးပြုဖို.အတွက် ရေးဆွဲပေးထားပါသည်။ကျွန်တော်တို. ဒီပုံ ဒီလူ
တွေကို ခွင်.မတောင်းပဲ သူတို.ပုံကိုအသုံးပြုမိ.သည်.အတွက် အထူးပဲတောင်းပန်ပါသည်။ကျေးဇူးတင်ပါ
ငိꨓ်းꨅူမ်းေꨀုꨳတꨰမ်ꨳ Designer ꨅꨤꨯးသꨰင်ꨅꨱတ်ꨳ တေꨵ တေꨵ ယဝ်ꨳꨁုꨳ မ်ꨮꨲ သုင်ꨁုꨳ။
10:56 PMSHANEDUCATION 1 comment